बिहानै खाली पेटमा खानुहोस् चार केस्रा लसुन, मिल्छ फाइदै फाइदा – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / बिहानै खाली पेटमा खानुहोस् चार केस्रा लसुन, मिल्छ फाइदै फाइदा
बिहानै खाली पेटमा खानुहोस् चार केस्रा लसुन, मिल्छ फाइदै फाइदा
admin4weeks ago स्वास्थ्य Leaveacomment 84 Views
काठमाडौँ । लसुनले थुप्रै रोगहरुबाट बचाउँछ । बिहान सबेरै लसुनको सेवन गुणकारी मानिन्छ । खाली पेटमा दुई वा चार केस्रा लसुनको सेवनले मधुमेह, जोर्नी दुखाई जस्ता समस्यामा आराम हुन्छ।
बिहानै २ वा ४ केस्रा काँचो लसुन नियमित रुपमा खाँदा जोर्नीहरु दुख्ने समस्याबाट आराम मिल्ने आयुर्वेदिक विशेषज्ञहरुले बताएका छन् । यसैगरी, रगतमा चिनीको मात्रासमेत नियन्त्रण गर्ने भएकाले मधुमेहका विरामीका लागि राहत मिल्छ।
✍️ नयाँ पुस्ता ८ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०७:४२
आज पनि कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुने बढी, कति थपिए ?
यसैगरी, लसुनको सेवनले छालासम्बन्धी समस्याहरुबाट पनि छुटकारा मिल्छ । यसले ‘फङ्गल इन्फेक्शन’ बाट बचाउँछ । लसुन पेटमा ग्यास भरिने समस्या, कब्जियत, उच्च रक्तचाप, रुघाखोकी, दम, निमोनिया र ब्रोन्काइटिस जस्ता समस्याहरुका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ।
यति मात्र होइन, कुन रोगका बिरामीले कसरी लसुन सेवन गर्ने भन्ने विधि थाहा भएको खण्डमा यसले मानिसको शरीरलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ । कानमा दुखेमा तोरीको तेलमा लसुनको केस्रो हल्का तातो बनाएर कानमा राख्दा आराम मिल्छ।
यसैगरी, नसाको विरामीहरुका लागि दुधमा लसुन उमोलेर पिउँदा नसा कमजोर हुँदैन । लसुनले रक्तसञ्चार नियन्त्रण गर्छ। त्यसैले उच्च रक्तचापका विरामीले खानी पेटमा लुसन खानुपर्छ ।
Previous नेपालमा बनेको बाइक नेपालिले नै किन्न नसक्ने , कति छ नेपालमै बनेको बाईकको मुल्य ?
Next अत्यधिक तौल बढेका गर्भवतीले भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती, नत्र ज्यानै जोखिममा